Fankiishiini Ofiinaqaa dhamsuu fi banuun jijjiraa,tarjaa tokkoo keessaatti galiinsaa biroo irratti hunda'uun, ofumaa galinsaa xumuruu. Tarjaan hangaa man'eewwan 2000 ykn diraawwan garaa garaa 2oo ta'an sirritti barbaada
Barruun xumuurame ni shoolama.
Kan xumuramee fudhachuuf,Galchi ykn furtuu qaree dhiibi.
Barruu miiltessuuf ykn xumura gulaaluuf,F2dhiibi.
yommuu arfiilee isaa galinsa duraa waliin wal simu fayyadamnee formulaa barressinuu,fankiishinoota kudhaan darbaan kan Dhullee keessaa tarreessun,hangii maqoota hiikame huundaa irraa,hangii maqoota kuusaa deetaa huundaa irraa,fi qabiyyee hangiiwwan moggaafaman huundaa irraa fayyadamun qacceen gargaarsaa ni uumama.
Ofiinaaqan qub-suukanaawaa dha.Fakkeenyaaf yoo man'ee keessatti " Waliigala" barreessite,osoo dursa ofiinaaqa kaka'uumsaleessin tarjaa walfakkata keessatti "waliigala" kan jedhu man'ee biraa keessatti galchuu hin dandeessu.
Title is: Ofiinaqaa